November 24, 2020 RESTBET 501 RESTBET501 25
နာမည်များစွာကဲ့သို့ Marcel Tisserand သည်အဝါရောင်နှင့်အပြာရောင်ဒီဂျစ်တယ်အပြောင်းအလဲကိုကြေငြာခဲ့သည်။
“ကူးစက်ရောဂါကြောင့်အပြင်ကိုပရိသတ်တွေမမြင်ရပေမဲ့လက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့ရဲ့စိတ် ၀ င်စားမှုကိုကျွန်တော်ခံစားခဲ့ရတယ်။ လူမှုမီဒီယာကိုကြည့်တိုင်း Fenerbahce ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုငါတွေ့တယ်။ ငါဒီကိုရောက်တော့ Galatasaray နဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုအကြောင်းချက်ချင်းပဲငါ့ကိုပြောပြတယ်။ ဒါရိုက်တာ၊ သမ္မတနှင့်ကစားသမားများကဒါဘီအကြောင်းပြောပြသည်။
Fenerbahçe – Galatasaray ဒါဘီသည်အလွန်ထူးခြားသည်။ ၎င်းသည် Paris-Marseille ဒါဘီနှင့်တူသည်။ ဒါဟာအရမ်းကိုထူးခြားတဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုပါ။ အငှားယာဉ်မောင်းက ‘မင်းလိုချင်တဲ့ပွဲဟာမင်းရှုံးပြီ၊ Fenerbahce ပရိတ်သတ်တွေကသူတို့ကဒီပွဲမှာသူတို့ရပ်တည်ချက်မှာမရနိုင်ရင်တောင်သူတို့စိတ်ထဲမှာနှလုံးသားနဲ့ပံ့ပိုးပေးမယ်လို့ပြောကြပါတယ်။
SULTANBET561 “DERBİDE İNTİKAMIMIZI ALACAĞIZ!” BETBABA100 “DERBİDE İNTİKAMIMIZI ALACAĞIZ!” BETBABA138 “DERBİDE İNTİKAMIMIZI ALACAĞIZ!” SUPERTOTOBET0120 “DERBİDE İNTİKAMIMIZI ALACAĞIZ!” SUPERTOTOBET0120 “DERBİDE İNTİKAMIMIZI ALACAĞIZ!” RESTBET501 BEŞİKTAŞ JOSEF DE SOUZA’YI AÇIKLADI RESTBET501 GALATASARAY’DA FLAŞ MUSLERA KARARI! BETPAS423 FATİH TERİM’DEN TAKIM TOPLANTISI! RESTBET501 EROL BULUT’TAN DERBİ ÖNCESİ İDDİALI SÖZLER RESTBET501 FENERBAHÇE’DEN TUGAY KAAN NUMANOĞLU AÇIKLAMASI!
25 Comments on RESTBET501 “DERBİDE İNTİKAMIMIZI ALACAĞIZ!”
ANDAÇ November 24, 2020 at 1:10 am
CEM ÖZGÜR November 24, 2020 at 5:00 am
HASAN November 24, 2020 at 5:30 am
ERDAL November 24, 2020 at 7:00 am
FERHAN November 24, 2020 at 8:40 am
ORHAN November 24, 2020 at 4:10 pm
CEREN BUĞLEM November 24, 2020 at 7:10 pm
NİLAY November 24, 2020 at 10:20 pm
KERİME RUMEYSA November 25, 2020 at 9:50 am
BAŞAK November 25, 2020 at 3:00 pm
CEREN November 26, 2020 at 2:20 am
YUSUF November 26, 2020 at 8:20 am
ABDULKADİR November 26, 2020 at 10:00 am
VELİ ENES November 26, 2020 at 9:10 pm
HAKAN November 26, 2020 at 11:00 pm
ÇAĞRI November 28, 2020 at 12:20 am
CEYDA November 28, 2020 at 6:50 am
ÇETİN November 28, 2020 at 9:40 pm
MEHMET ŞİRİN November 30, 2020 at 3:00 am
HİLAL December 3, 2020 at 8:10 pm
ÖZDEN December 5, 2020 at 7:30 am
KAYA December 5, 2020 at 12:10 pm
ORHAN December 6, 2020 at 11:10 pm
GÜLŞAH December 7, 2020 at 3:50 pm
SİBEL December 7, 2020 at 6:00 pm